Mpanamboatra sy mpamatsy lamba maimaim-poana avy amin'i China 1mm PVC | Gokai
Ny takelaka malalaka 1mm PVC maimaim-poana dia miaraka amina rafitra finday sy ny fanosorana ambonin-javatra manjary safidy tsara ho an'ireo mpanonta manokana sy mpanamboatra takelaka ary koa fitaovana mety amin'ny haingon-trano. Ny takelaka vita amin'ny busa vita amin'ny PVC dia be mpampiasa amin'ny famantarana, takelaka, fampisehoana sns.
1mm PVC Foam Board maimaim-poana
Ny takelaka malalaka 1mm PVC maimaim-poana dia miaraka amina rafitra finday sy ny fanosorana ambonin-javatra manjary safidy tsara ho an'ireo mpanonta manokana sy mpanamboatra takelaka ary koa fitaovana mety amin'ny haingon-trano. Ny takelaka vita amin'ny foam-baravarankely dia efa be mpampiasa amin'ny fambara, takelaka, fampisehoana sns sns.
Tombony ny takelaka malalaka foam an'ny PVC
1.Matanjaka sy maharitra
Ny fanoherana ny abrasion an'ny birao maimaim-poana amin'ny PVC, ny tanjaky ny mekanika ary ny faharetany no tombony lehibe amin'ny fampiasana injeniera amin'ny fananganana sy fananganana.
Ny takelaka vita amin'ny PVC dia maivana amin'ny lanjany raha ampitahaina amin'ny trondro ary azo voriana haingana sy halefa, izay mahatonga azy io ho fanoloana tsara ny tontonana hazo nentim-paharazana.
3.Mora ny manodina
Azonao atao ny manapaka, mamolavola ary mametaka ireo takelaka vita amin'ny foam vita amin'ny PVC arakaraka ny filany.
4. Tsy misy poizina
Ny tabilao vita amin'ny PVC dia fitaovana azo antoka sy sariaka ara-tontolo iainana izay efa nampiasaina nandritra ny zato taona mahery. Tsy misy formaldehyde be dia be toy ny fitaovana haingon-trano anatiny hafa.
5.Fanoherana ny afo
Ny ravin-tsolika PVC dia ho may rehefa tratry ny afo. Na izany aza, raha esorina ny loharanom-pahalalana dia hijanona tsy hirehitra izy ireo. Noho ny atin'ny kôlôlônia avo dia avo dia manana toetra azo antoka amin'ny afo ny vokatra nitarina PVC.
Ny fanoherana ny hamandoan'ny PVC dia fananana manan-danja, ary ny olona dia mampiasa tabilaon'ny busa ao anaty fampiharana an-dranomasina maro.
Ny tabilao vita amin'ny PVC dia miaraka amin'ny fananana manohitra ny lozisialy sy ny fitoniana simika izay hitazona azy io ho azo antoka na dia amin'ny fotoana ifandraisan'ny simika aza.
Ny takelaka fanitarana PVC nitarina indraindray dia ampiasaina amin'ny tadim-peo. Na dia tsy azo sakanana tanteraka aza ny feo dia azo atao ny mampihena ny tabataba.
Fampiharana ny Board UV foam
1) Birao fanaovana dokam-barotra sy tabilao fanaovana sonia
2) Fampirantiana & fampirantiana
3) Takelaka fanaovana doka ho an'ny fanontana, sokitra ary fanapahana
4) haingon-trano ho an'ny rindrina fisarahana sy fisehoana amin'ny varavarankely
Teo aloha: 20mm fanaka vita amin'ny boaty PVC
Manaraka: UV pirinty foamboard 2mm